Ingane eyondliwe ngokungafanele ayingabi nampilo nje kuphela, ayinanjabulo, futhi lokhu kuludaba olukhathazayo oluthinta noma yimuphi umzali omusha. Ukondliwa okufanele (ukudla okudingekayo ukuze uhlale uphilile), kubalulekile, empilweni. Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho komuntu siqu, nansi into eyasebenza. Inikezwa njengethiphu ewusizo kubazali abafuna izindlela ezingcono zokukhulisa izingane ezinempilo.
Ezinye izibhedlela nodokotela ngokusobala bamukele lesi simemezelo sokuthi “umntwana okhuluphele namuhla kusho isiguli kusasa.”
Abanye balungisa ukudla okuhlinzekwa ezibhedlela nakodokotela bezingane—okuyi-powdered mess okufanele incibilike emanzini bese uyondla enganeni—kutholakale ukuthi icasula ingane. Uma uke wayinambitha, uzovumelana nengane. Imbi kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, konke kuyi-carbohydrate. Ama-carbohydrate ayizinto ezifana nesinkwa, i-pasta, amazambane, uju, ushukela, njll. Ukudla kwengane akunawo amaprotheni adingekayo ukwenza izicubu nethambo. Amaprotheni inoma eliphi iqembu elikhulu lamakhemikhali eliyingxenye edingekayo yazo zonke izinto eziphilayo. Amaphrotheni atholakala ekudleni okufana nenyama, ushizi, inhlanzi noma amaqanda futhi kuyadingeka ukuze umzimba ukhule ube namandla. Ukudla okulungiselelwe okusetshenziselwa izingane namuhla kwenza kuphela amafutha. Uma ubona ingane ebukeka igcwele kakhulu futhi ivuvukala, uyazi ukuthi ingane idla kuphela ukudla kwe mpuphu ehlanganisiwe yobisi, ushukela (uhlobo loshukela olutholakala ezitsheni zezithelo, uju, isitshalo nezicubu zezilwane) namanzi—wonke ama-carbohydrate.
Imbangela enkulu yokuphazamiseka kwengane empilweni yayo esencane nje ukudla. Ingane kungenzeka idliswe, yebo. Kepha ngani? Ukunambitha kabi, kwe-high carbohydrate powdered milk solutions noma ubisi lwebele lwe-skim oluvela kumama osebenza ngokweqile? Ingxenye yokudla kumele ibe namaphesenti asindayo amaprotheni. Amaprotein yikhambi lokwakha izinzwa namathambo. Isosha elilimele ngeke liphole ngaphandle kokudla kakhulu amaprotheni. Izilonda (isilonda esikhumbeni noma ulwelwesi ngaphakathi kwengxenye yomzimba, njengesisu) ngeke zilulame ngaphandle kokunikwa ukudla okunempilo kwamaprotheni.
Ukuze enze ubuchopho, ithambo nezicubu, ingane kufanele inikezwe amaprotheni—kusukela inezinsuku ezimbili ubudala ize ibe neminyaka emithathu ubudala. Lokho kwenza izingane eziqinile, ezinhle, eziqwashisayo zilele kahle futhi zenze kahle.
Le nkinga yaqale yaxazululwa njengendaba yomuntu siqu. Njengobaba onomntwana omncane owayengeke aphile, kwakufanele kuthathwe izinyathelo ezisheshayo zokumsindisa. (1) Kwakumele akhishwe esibhedlela, (2) inkinga kwakumele itholakale futhi (3) kwakudingeka ilungiswe. Isikhathi sonke esasikhona sasingaphansi kwamahora angamashumi amabili nane. Wayesefa.
Ngakho-ke (1) wakhishwa esibhedlela. Futhi (2) kwatholakala ukuthi ubengadli noma angakwazi ukudla. Futhi (3) ifomula eyayimnikeza umsoco awudingayo yathuthukiswa yanikezwa yena. Ifomula yiresiphi noma iqoqo lemiyalo yokuhlanganisa izithako ukulungiselela ukulungiswa kwento, njengokuhlanganiswa kwamavithamini, ukudla kwengane, njll.
Ifomula yasebenzisa ibhali (okusanhlamvu okuvela ohlotsheni lwesitshalo sikakhokho). Amasosha amaRoma ayemashe futhi alwa izimpi ngenkathi ehlala ekudleni kwebhali, okusanhlamvu okunokuqukethwe kakhulu kwamaprotheni. Le fomula isondele kakhulu kubisi lomuntu olungafakwa kalula ndawonye. Kuyifomula endala yaseRoma evela eminyakeni engaba ngu-2 200 edlule.
Kuyinkinga kancane ukwenza. Kufanele usebenzise imbiza noma iketela elincane ukupheka ibhali ku-(kungcolisa ngempela ibhodwe, ngakho-ke uzodinga imbiza esetshenziswa kuphela futhi njalo ukupheka ibhali). Futhi kufanele upheke ibhali isikhathi eside ukuthola amanzi webhali, ngakho-ke kwesinye isikhathi kulula ukukhohlwa ukuthi kusesitofini bese kuyasha Kodwa noma kunjalo, kuyasiza ngokwendlu ezolile kanye nengane enempilo.
Uxuba ukunikezwa okugcwele kwamahora angamashumi amabili nane kwale ndlela yokupheka ibhali nsuku zonke, kuyibhodlela emabhodleleni angabilisiwe bese uyibeka lapho izohlala ibanda khona. Njalo shisa ibhodlela lize lifike ku-98.6°F noma u-37°C (lihlole ngokufaka squir ngemuva kwesandla sakho ukubona ukuthi kufudumele kakhulu noma kupholile kakhulu) ngaphambi kokuyinika ingane.
Futhi, yize uzama ukugcina umntwana esehlelweni, uyisiwula ukuthi ungondli ingane lapho ilambile.
Ingane, uma isidlile ingxenye egcwele yokudla, imvamisa ilala amahora amaningi noma kunjalo. Uma engakwenzi, kuhlale kunesizathu, njenge-diaper emanzi. Lapho ingane okungafanele ikhale ikwenza lokhu, funa lokho uze uthole ukuthi kungani. Musa ukulandela imibono engalungile yokuthi (1) ingane imane inenkani noma (2) ukugula okungathi sína okudinga ukuhlinzwa ngokushesha. Kwenye indawo phakathi kwakho uzothola isizathu sangempela.